यसरी मारिदैछन् छोरीहरु |
यसरी मारिदैछन् छोरीहरु
प्रकाशित मिति :2018-06-17 16:35:44
सुर्खेत । पहिलो सन्तान छोरी जन्माएकी सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाकी विष्णु दोस्रो सन्तान छोरा चाहन्थिन् । तर उनको चाहना अनुसार दोस्रो सन्तान छोरा जन्मिएन । दोस्रो मात्रै होइन, तेस्रो पनि छोरी नै जन्मिइन् ।
त्यसपछि भने उनलाई चिन्ता लाग्यो, ‘छोराको आशामा फेरि पनि छोरी नै जन्मिए के गर्ने ?’ चौथो गर्भ बसेपछि उनीसँगै उनका श्रीमान् पनि चिन्तित भए ।
उनीहरुको चिन्ता समाधानको उपाय एउटै भयोे, ‘भ्रूणको लिङ्ग पहिचान’ । उनीहरुले नेपालगञ्ज गए भ्रुणको लिंग पहिचान गरे । छोरी रहेछ भन्ने थाहा भयो । अनि गर्भपतन गरे ।
यो क्रम छैटौं गर्भसम्म चलिरह्यो । अन्ततः ३९ वर्षको उमेरमा सातौं पटकको गर्भमा छोरा रहेछ । त्यो पनि भ्रूणको लिंग पहिचानपछि थाहा भयो । र, त्यो गर्भले छोरा भएको कारण जन्म लिन पायो ।
उनको भनाइमा लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रचलन उनका छरछिमेकमा सामान्य मानिन्छ । उनले भनिन्, ‘नेपालगञ्जमा गएर लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने १५ जना जति छिमेकी छन् ।’
विष्णुकी छिमेकी सुनिताले विवाह भएको सात वर्षमा तीन पटक गर्भाधारण गरे पनि सन्तान जन्माइनन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउने बित्तिकै उनी गर्भपतन गर्थिन् । चौथो पटकको गर्भमा छोरा रहेको थाहा भएपछि उनले बच्चा जन्माइन् ।
परिवारको चाहना बमोजिम छोराकै लागि तीन पटकसम्म गर्भपतन गरेको उनले बताईन् । लगातारको गर्भपतनले गर्दा सुनिताको शरीर कमजोर भएको छ ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी विमलाले पहिलो सन्तान छोरा जन्माएपछि परिवारमा खुशी छायो । दोस्रो सन्तान पनि छोरा भएपछि उनलाई अब छोरीको चाहना छैन ।
‘सन्तान भनेका छोरा हुन्, काम गरेर खान सक्छन्’ विमलाले भनिन्, ‘छोरी भए चिन्ता मात्रै थपिन्छ ।’
दुई छोरीकी आमा वीरेन्द्रनगरकी ४० वर्षीया मीना पौडेल थप सन्तान नजन्माउने निर्णयमा छिन् । तर घरपरिवार र छिमेकले ‘छोरा नभई हँुदैन’ भनेपछि दिक्क छिन् । भन्छिन्, ‘हामीलाई आवश्यकता नभएको छोरा यो समाजलाई किन चाहिन्छ ?’
२१ औं शताब्दीमा पनि लिंग पहिचान गरेर छोरीको भ्रूणमै हत्या गरिन्छ । कि त छोरी जन्माएका कारण आमाहरु अपहेलित हुन्छन् । समाजमा उनीहरुलाई ‘एउटा छोरा पनि जन्माउन नसक्ने’ वा यस्तै नाममा घृणा भावले हेरिन्छ ।
वीरेन्द्रनगरकी जोरमाया शर्मा तिनै महिलामा पर्छिन्, जसले छोरी जन्माएका कारण अपहेलना सहनुपर्यो । यतिसम्म की छोरी जन्माएको भनेर सुत्केरी अवस्थामा न स्याहार पाइन्, न राम्रोसँग खान । बरु बदलामा परिवारबाटै तिरस्कार र घृणा सहन बाध्य भइन् ।
‘छोरी जन्मिएको कारण सुत्केरीमा स्याहार पाइएन’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी हँुदा आराम होइन, घरको सबै काम गर्नुपर्यो । अझै छोरी जन्माइ भनेर नानाथरिका आरोप त कति हुन् कति ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र, छोरा नजन्माएको भनेरै जोरमायालाई श्रीमानले पनि वास्ता गर्न छोडे । दुईटै सन्तान छोरी भएपछि उनलाई परिवारबाटै हिंसा भयो ।
त्यसैले उनले छोरीहरुलाई नै अब्बल बनाउने संकल्प गरिन् । अछामबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर झरिन् । ‘छोरीको भविष्य राम्रो बनाएर समाजमा छोरी पनि छोराभन्दा कम छैनन् भन्ने देखाउनु छ’ शर्मा भन्छिन्, ‘जसको कारण घर छोडेर यहाँसम्म आएकी छु ।’ उनका छोरीहरू पुनम र निलम अहिले बीबीएस पढिरहेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर ८ कै गीता बिसीले दुई छोरी जन्माइन् । त्यसपछि उनलाई थप सन्तानको रहर जागेन । अरु सन्तान नजन्माउने अठोट पनि लिईन् ।
तर, घरपरिवारकै अरु सदस्य अझै पनि छोरा जन्माउन दबाब दिन्छन् । छरछिमेकमा नानाथरीका कुरा सुन्छिन् । कहिलेकाहीँ उनलाई आफ्नो अठोट सही भयो कि गलत भयो भन्ने कुराले पिरोलिरहन्छ ।
नेपाली समाजमा अझै पनि छोरालाई महत्वका साथ हेरिन्छ । त्यसैले माथिका महिला झैं कोही भ्रुणको लिंग पहिचान गरेरै भएपनि छोरा जन्माउँछन् । कोही छोरी मात्रै जन्माउने निर्णय गरेकै कारण थप हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
कानुन अनुसार विशेष अवस्था बाहेक १२ हप्तापछि भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन पाइँदैन । तर पनि पितृसतात्मक सोच, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जस्ता कारण लिङ्ग पहिचानपछि छोरी भएमा गर्भपतन गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ ।
सामाजिक तथा पृतसतात्मक सोचाईबाट ग्रसित समाजमा छोरालाई नै महत्व दिने भएपछि छोरीमात्र जन्माउँदा सन्तान पूरा नभएको ठान्ने प्रवृत्ति छ । छोरीको जन्मपछि सन्तानको इच्छा पुरा गर्नेहरु समाजबाट टाढै रहनुपर्ने अवस्था रहेको शिक्षक चन्द्रकली खत्री बताउँछिन् ।
‘सामान्य परिवारमा भन्दा पनि शिक्षित र सम्पन्न भनिने परिवारका महिलालाई अझै पीडा सहनुपरेको देखिन्छ’ उनी भन्छिन् ‘फरक यति हो शिक्षित परिवारमा यस्ता कुरा बाहिर आउँदैन ।’
छोराको जन्म बढी
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतमा ३२ हजार ७ सय ६० जना शिशु जन्मिए । तिमध्ये छोरा शिशु १७ हजार ५ सय ८ अर्थात् ५३ प्रतिशत छन् । भने १५ हजार २ सय ५२ छोरी । अर्थात् जिल्लामा प्रति १०० छोरी जन्मँदा ११५ छोरा जन्मने गरेको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा जन्मिएका शिशुको संख्यामा छोरीभन्दा छोराको संख्या बढी देखिन्छ । अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर विनोद बस्नेतका अनुसार सो अवधिमा ८ हजार ५ सय ९४ छोरा जन्मिए भने ७ हजार दुई सय २२ छोरी जन्मिएका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निमित्त सुपरीटेन्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्का कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने क्रम बढेकोले जन्ममा छोरीको संख्या कम हुँदै गएको बताउँछन् ।
नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन) सुर्खेतकी संगीता ओलीका भन्छिन्, ‘कसुर थाहा पाएर पनि दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन नसक्दा भ्रुण हत्या विकराल रुपमा बढ्दै गएको छ ।’
विद्यार्थी भर्नामा पनि छोरा नै बढी
जन्मँदा नै छोरीहरू कम भएपछि त्यसको असर विद्यार्थी भर्नामा देखिन थालेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतको पाँच वर्षको त तथ्याङ्कले पनि विद्यालयमा भर्ना हुने छोरीको सङ्ख्या घटेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्र्ष २०७०÷७१ देखि २०७३÷७४ सम्म ५१ हजार ५ सय ९३ जना बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तिनमा २६ हजार १ सय ६४ छोरा छन् । भने छोरीको संख्या २५ हजार ४ सय २९ रहेको छ ।
सामान्यतया शिक्षामा पनि छोरा र छोरीमा विभेद छ । छोराहरुलाई निजी विद्यालय पठाउने मध्यम वर्गीय अभिभावकले छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने आम प्रचलन जस्तै छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा समेत छोरीको संख्या घटेपछि शिक्षकहरू नै अचम्ममा परेका छन् ।
धुलियाविट माध्यामिक विद्यालय वीरेन्द्रनगरका शिक्षक विष्णुप्रसाद तिवारीका अनुसार छोरालाई निजी स्कुल र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने चलन थियो । तर दुई वर्षयता सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने छोरीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ ।
धुलियाविट माध्यामिक विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष ४१ जना छोरी नयाँ भर्ना भएका थिए । भने ५४ जना छात्र विद्यालय भर्ना भएका छन् । घट्दै गएको छात्राको तथ्याङ्कले पनि जन्ममा नै छोरीहरु कम हुँदै गएको ईंगित गर्ने उनले बताए ।
१४ वर्षमुनिका छोरीको संख्या घट्दो
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा समग्र जनसंख्या हेर्दा महिलाको संख्या बढि छ । तर १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्यामा छोराको संख्या बढी छ ।
‘समग्रमा हेर्दा महिलाको जनसंख्या बढी भएता पनि पछिल्लो समय छोरीको संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ’ तथ्यांक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विनोद कँडेल भन्छन्, ‘जसले गर्दा जनगणनाको तथ्यांक अहिले पिरामिड आकार बनेको छ ।’
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा पुरुषको जनसंख्या महिलाको भन्दा ११ हजार ९ सय ६२ ले कम भए पनि १४ वर्षमुनिका छोरीको सङ्ख्या सोही उमेरका छोराको भन्दा ३ हजार ३ सय २१ ले कमी छ । जुन सङ्ख्या २०५८ को जनगणना अनुसार १ हजार पाँच सयले कमी हो ।
छोरी प्रोत्साहन कार्यक्रम
भ्रूणको लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने क्रम बढेपछि सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘छोरी प्रोत्साहन कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । नगरपालिकाले छोरी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नको लागि एक हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर बैंक खाता खोलिदिने पनि निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकाल भन्छिन् ‘नगरपालिकाको पहिलो बैठकले छोरी जन्मिए निःशुल्क बैंक खाता खोलेर त्यसमा रु.१ हजार जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । छोरीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन यसो गरिएको हो ।’
उनका अनुसार यो अभियानपछि वीरेन्द्रनगरमा छोरीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेमा आशावादी छन् । ढकाल भन्छिन्, ‘पाँच वर्षभित्र भ्रूण हत्या पूर्णरूपमा बन्द गर्ने योजना छ । यसको लागि लिंग पहिचान गरेर छोरी मार्नेलाई कानुनी कठघरमा ल्याउन जरुरी छ ।’
छोरी भएको थाहा पाएपछि छोरीको भू्रण मै हत्या गर्ने बाबुआमाले जन्माउने छोराहरुका लागि बुहारी चाहिँ कसले जन्माइदिने त ? छोरी मार्ने बाबुआमालाई बुहारी खोज्ने अधिकार हुन्छ ? आफूले जन्माउने सन्तान छोरा नै होस् भन्ने चाहानेहरुले यी प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ कि छैन ?
(लक्ष्मी भण्डारी सुर्खेतबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)